Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment 4.5.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.5.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Red Bull တီဗီလောကီသားတို့သည်အမှကြိုဆိုပါ၏!
ဖြစ်ရပ်များ, action ကိုအားကစားအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာ့စွန့်စားရာမှအပူဆုံးကခုန်ပြိုင်ပွဲနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဗီဒီယိုများအသက်ရှင်ရန်သငျသညျရှေ့တန်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်း။ Red Bull တီဗီ On-demand မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်တိုက်ရိုက်စီးနှင့်အတူသာမန်ကျော်လွန်သင်ကြာပါသည်။ , အနုပညာရှင်တွေ setting လမ်းကြောင်းသစ်ကနေဂီတရှာဖွေတွေ့ရှိထိပ်တန်းအားကစားသမားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးထောင့်မှ daredevils globetrotting လိုက်နာပါ။
အဆိုပါ Red Bull တီဗီ app ကိုယခု Download များနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များ, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, ဂီတပွဲတော်များ, ရုပ်ရှင်, ဗီဒီယိုများ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်ပြပွဲမှပြိုင်ဘက်ကင်း access ကိုပျော်မွေ့။
ထိုကဲ့သို့သောမော်တော် Music, Dance, နှင်း, ဆိုင်ကယ်, ရေနှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားအဖြစ် * Browse ကိုလမ်းကြောင်းများ
* စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပွဲတော်များနှင့်ဂီတ Primavera အသံတူ, Red Bull ဂီတပွဲတော်များ, Lollapalooza, EDC, Bonnaroo, Roskilde နှင့် ACL တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ
UCI, F1 နှင့် WRC ပြိုင်ကားများနှင့်အခြားများစွာသော: * နောက်ဆုံးပေါ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲနှင့်အတူနေ့စွဲအထိသိမ်းဆည်းထားပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း Picks ၏အနည်းငယ်ကိုကြည့်ပါ:
စက်ဘီးဖြစ်ရပ်များ: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စက်ဘီးဖြစ်ရပ်များ, ဘီအမ်အိပ်စ, MTB, တန့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကုန်းဆင်းတွင်ပြိုင်ကား
- Red Bull သောင်းကျန်း - တောင်ကြီးတောင်ငယ်စက်ဘီးအတွက် GUTS နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏အကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်မှု
- Mercedes-Benz UCI MTB ကမ္ဘာ့ဖလား - ဆင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်တောင်တော်သို့စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ
- Crankworx Slopestyle ကမ္ဘာ့ဖလား Championship- ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး slopestyle ယှဉ်ပြိုင်
- ရိုးရှင်းသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ - အဆိုပါဒဏ္ဍာရီစကိတ်စီးနှင့်ဘီအမ်အိပ်ပြိုင်ပွဲ
- Red Bull Hardline- တစ်ဦးက MTB ကျွမ်းကျင်မှု၏မဆုတ်မနစ်စမ်းသပ်
မော်တော်ဖြစ်ရပ်များ: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ WRC, ခက်အန်ဒူရို, Motocross, WESS နှင့်နစ်မာစတာဥရောပချန်ပီယံရှစ်
- FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံ - ကမ္ဘာ့အနှံ့ဆန္ဒပြပြိုင်ကားအပြည့်အဝ WRC ရာသီကိုကြည့်ပါ
- Dakar ပြိုင်ပွဲ - ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးဂုဏ်သတင်း offroad ဆန္ဒပြ
- အဆိုပါသဲသောင်ပြင်တွင် F1 ကို - တစ် F1 ကိုကမ်းခြေပြေး၏ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်ကလစ်ကြည့်ရှုပါ
- အဆိုပါနှင်းခုနှစ်တွင် F1 ကိုပြရန် - သြစတြီးယားရှိရေခဲနှင်းလျှောစီးတောင်ကုန်းတခုတခုအပေါ်မှာ F1 ကိုကားတစ်စီး drive ကိုကြည့်ရှုပါ
- Red Bull လမျးဖွောငျ့ Rhythm - အဘယ်သူမျှမကအခြားတူသောအဆိုပါ supercross အဖြစ်အပျက်
- Red Bull Hare အပြိုင်အဆိုင်နယ်ချဲ့နေမှုကို - ခက်အန်ဒူရိုရဲ့ sternest စမ်းသပ်
- ကမ္ဘာ့ဖလားအန်ဒူရိုစူပါစီးရီး - ရောနှောပညာရှင်များနှင့်အပျော်တမ်းများအတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချန်ပီယံ
ရေဖြစ်ရပ်များ: ရေငုပ်, surfing နှင့် kiteboarding အပါအဝင်ရေအားကစားရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုပါ
- Red Bull Cliff ရေငုပ်ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီး - အထင်ကရနေရာများတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးရေငုပ်သမား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GoPro အားကစားသမားကလစ်များနှင့်အတူသစ်တစ်ခုရှုထောင့်အရ
- Red Bull ကိပ်ကြောက်လန့် - ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ surfers ကမ္ဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးလှိုင်းတံပိုး၏တဦးတည်းအပေါ်ကိုယူ
- Volcom ပိုက် Pro ကို - အမြင့်လောင်းကြေးပြိုင်ပွဲ surfing
အကအခုန်များနှင့်စစျပှဲမြား: အရှိဆုံး EXIT ပြိုင်ပွဲစောင့်ကြည့်
- Red Bull ဘီစီ One World Final - အနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးထိပ် B-Boy သရဖူရရှိလိမ့်ဘယ်သူနည်း
- Just Debout - ကမ္ဘာ့ဗွေဆော်ကခုန်ယှဉ်ပြိုင်
လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှဆန်းသစ် B-Boy နဲ့ B-မိန်းကလေးသမားတွေ Featuring - သူ - တစ်နှစ်တာတိုက်ပွဲ
- Red Bull Batalla က de los Gallo ပြောတာကတော့ - စပိန်စကားပြောကမ်ဘာပျေါတှငျအကောင်းဆုံး MCS သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Rhymes ကိုသုံးပါ
နှင်းဖြစ်ရပ်များ: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင်းလျှောစီး, နှင်းလျောစီးနှင့်ရေခဲလက်ဝါးကပ်တိုင်ကုန်းဆင်းတွင်ဖြစ်ရပ်များ
- စက်ဘီးအလွတ်စီးခြင်း World Tour - GoPro နှင့်အတူရိုက်ကူးသည့်ပြင်းထန်သောစက်ဘီးအလွတ်စီးခြင်းနှင်းလျှောစီးပြေးစောင့်ကြည့်
- Red Bull ရေခဲပြင်နဲ့ Burton အမေရိကန်ပွင့်လင်းပျက်ကျ
ရုပ်ရှင်နှင့်ရှိုးပွဲများ: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရုပ်ရှင်, ရှိုးများ, ဗီဒီယိုများ, GoPro ကလစ်များနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ငါတို့သည်သိနားလည်အဖြစ်လူတွေကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကို!
- အာကာသ၏ Edge မှမစ်ရှင် - ထို Red Bull Stratos မစ်ရှင်၏နောက်ကွယ်မှာ
- ယောဘကိုအဘယ်သူသည် - လှိုင်းဒဏ္ဍာရီဂျေမီ O 'Brien ၏ဘဝအတွင်းပိုင်း
- Kaleidoscope - အစွန်းရုပ်ရှင်ချမှတ်ခြင်းဖြတ်တောက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဘီအမ်အိပ်စစီးနင်း
- လေယာဉ်၏အနုပညာ - ကမ္ဘာ့အများဆုံးတိုးတက်သောနှင်းလျောစီးရုပ်ရှင်
- အဓိကရန်သံ - Ironman Sebastian Kienle က ironman အားကစားသမားဖြစ်ကြာသောအရာကိုမှာအတွင်းပိုင်းကြည့်ပေးသည်
- အဆိုပါသင်ယူ Curve - ထိပ်တန်းဘီအမ်အိပ်စမြင်းစီးသူရဲကို Red Bull Joyride အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ slopestyle တောင်တော်သို့စက်ဘီးစီးနေသိတော့
- စီးနင်: ယူနိုက်တက် - ယှဉ်ပြိုင် Moto မြင်းစီး၏တစ်ဦးကကမ္ဘာ့ဖလား
- Moto 8 - Motocross အတွက်အကောင်းဆုံး Exploring
- Awolnation - တီးဝိုင်းဖြစ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လိုများ၏အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်
ကမ္ဘာတဝှမ်း Red Bull Follow နှင့်အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောအရပ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်ပြိုင်ပွဲကိုတွေ့ကြုံခံစား!
ယင်း၏အားကစား, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, UCI, Ironman, F1 ကို, WRC, တီဗီ, ဂီတ, ပွဲတော်များ, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများပဲဖြစ်ဖြစ်, Red Bull တီဗီကအားလုံးကိုရှိပါတယ်!
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment အား အခ်က္ျပပါ
densw12 စတိုး 1.15k 206.46k
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.5.2.1
ထုတ်လုပ်သူ Red Bull
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.redbull.tv/privacy
App Name: Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment
Release date: 2019-07-09 19:30:41
လက်မှတ် SHA1: 3C:CF:C4:E7:14:50:82:21:50:CD:F2:44:06:81:A6:71:AF:C7:87:B1
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nous Knowledgemanagement
အဖွဲ့အစည်း (O): NOUS Knowledgemanagement
နယ်မြေ (L): Vienna
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Vienna
Red Bull TV: Live Sports, Music & Entertainment APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ